"I-Constant Gardener" ye-movie yasekhaya yegumbi lokulala elilodwa
Yakhiwa ngo-1919, iRosslyn ingelinye lamakhaya aseNairobi amadala futhi akhethekile kakhulu asekhona. Setha kumahektha ama-2 ezingadi ezizimele siseduze ne-UN, iMakethe yeVillage kanye ne-Westlands. Sinezingoma ezingashadile ezingu-2, indlu yokugezela engu-1 ephindwe kabili ne-1 enohlu oluhlukene ku-Airbnb
URosslyn ungenye yezindlu zabalingisi ezindala kakhulu eNairobi futhi sekuyiminyaka engaphezu kwengu-50 ikhaya lethu lomndeni.
Sinikeza indawo yokulala nebhulakufesi ekamelweni elithokomele elilodwa, 'Elizabeth's Room', ekhaya lethu lomlando.
Eduze kwekamelo lakho lokulala kunendlu yokugezela ehlanganyelwayo (kuphela uma sinezinye izivakashi noma umndeni) enebhavu lokuqala le-claw foot, ishawa ephathwayo ngesandla, indlu yangasese kanye nomcengezi.
Ibhulakufesi eligcwele lesiNgisi liyisipesheli sendlu, isithelo esisha, itiye noma ikhofi yaseKenya esanda kuphekwa, ibhulakufesi eliphekiwe elinamaqanda ethu amahhala, i-toast, marmalades, muesli/oats/porridge konke kuyatholakala. Uma unezidingo zokudla sicela usazise ngesikhathi sokubhuka.
U-Rosslyn wasetshenziswa njengekhaya nengadi yefilimu evusa amadlingozi ye-'The Constant Gardener' ka-2005 edlala u-Ralph Fiennes no-Rachel Weisz owine i-Oscar ngendima yakhe.
I-Thigiri, noma i-New Muthaiga, kwaze kwaba ngawo-1970 yayiyindawo enkulu yekhofi lapho yayidayiselwa indawo yokuhlala eyihektare elingu-1.Umuzi wethu, uRosslyn, wandulela ukuthuthukiswa, wakhiwa u-Andy Anderson, umzingeli, ngo-1919.
URosslyn uwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya eMakethe Yedolobhana, imizuzu eyi-7 ukuya emahhovisi eNhlangano Yezizwe eGigiri (ngaphezulu ngezikhathi eziphakeme), imizuzu eyi-10 ukuya eWestlands, imizuzu engama-20 ukuya edolobheni laseNairobi, imizuzu engama-45 ukuya e-JKIA International Airport kanye naseWilson Airport.Lezi zikhathi ezi-3 zokugcina zikhuphuka ngezikhathi zethrafikhi.
Uma udinga itekisi singakuhlelela eyodwa ngamanani afanelekile.
Siseduze nehlathi elihle leKarura elinikeza amakhulu amahektha okuhamba okuphephile, ukugijima, ukuhamba ngebhayisikili. Izinyamazane ezincane nezinkawu zingabonakala.
Ungakhetha izinga lakho lokuxhumana; gcina ubumfihlo bakho noma ujoyine noma ubani womndeni osekhaya lethu ngaleso sikhathi.